Barruun 'Time' gaazexeessitoota adamsamaa turan 'Nama Cimoo Bara Kanaa' gochuun filate - BBC News Afaan Oromoo
Barruun 'Time' gaazexeessitoota adamsamaa turan 'Nama Cimoo Bara Kanaa' gochuun filate
Goodayyaa suuraa Time's covers of Jamal Khashoggi and the staff from the Capital Gazette
Gaazexeessitoota ajjeefamaniifi hidhaman 'Namoota Bara Kanaa' (kan 2018) jechuudhaan barruun the Time filateera. Gaazexaan "The Guardians" jedhamus bara kanaaf filatamaa barruu kanaan filatameera.
Barruun kun gaazexeessitoota sababii hojii isaaniitiif qofa xiyyeeffannoo jala galuun adamsamaa turan afur seenaa isaanii ilaaleera.
Gaazexeessaan beekamaa Qoontsilaa Sawudii Turkii keessatti ajjeffame Jamaal Kaashogjii keessatti argama.
''Kan gaafatamnus taanaan walumaani'' Abbaay Tsahaayyee
'Mootummaan namoota miidhe kiisuu qaba'
Hojjetaan barruu Capital Gazette, gaazexaa US kan namoonni shan keessaa ajjeefaman seenaan isaanii ka'eera. Kana malees gaazexeessaan lammii Filiippiinsi Maariyaa Ressa fi haadha warraa Wa Lone nama lammii Maayinmaar akkasumas Kyaw Soe Oo barruu kana keessatti ilaalamaniiru.
Goodayyaa suuraa Barruun Time gaazexeessitoota ciccimoo bara kanaa seenaa kaaseera
Barruun Time akka jedhetti ogeessonni kunneen kan addatti filatamanii irratti xiyyeefatame, "balaa guddoo isaanirra ga'uu danda'u osoo beekanii dhugaa barbaaduttii cichan, haqa jallate bakkatti akka deebiyuu ifatti ol fuudhanii dubbatan."
Gaazexeessitoonni kunneen eenyfaadha?
Jamaal Kashogjii gaazexeessaa beekamaa Sawudiifi gaggeessitoota Sawud Arabiyaa qeequudhaan kan sirriitti beekamudha. Onkoloolessa keessa erga Qoontsilaa Sawudii Istaambul jiru kessa erga seenee booda kan dhabame.
Aanga'oonni Sawudii Arabiyaas gaazexeessaan kun akka gamoo Qoontsilaa sana keessatti ajajaan ajjeefame amananii qondaaltota tikaatu akka malee kana raawwatan jedhan.
Garuu hawwaasni addunyaa hedduun garuu ajaja Ilma Mootichaa Sawudii Mohaammed biin Saalmaan kan MBS jedhamu Kaashogjiin qeeqaa tureen akka ajjeefame amnanu.
Kaashogjiin baqattummaan US keessa kan jiraatu yommuu ta'u Washington Post tiif barreessaa tureera. kaadhima isaa lammii Turkii kan taate waliin gaa'ela ijaarrachuuf jecha ragaa barbaachisu guuttachuuf ture kan Istaambul deeme.
Ajjeechaan kun biyyoonniifi jaarmiyaaleen addunyaa akka Sawud Arabiyaa abaaran taasiseera, Pirezedaantiin US fi bulchiinsi isaa ammoo warra MBS abaaran kanatti makamuu irraa of qusataniiru. Dhaabbanni basaasaa/tikaa Ameerikaa (CIA) ajjeechaan Kashoogji MBS akka ajajame gabaasullee, abbaan manaa intala Pirezedaanti Tiraamp Jaared Kushineera Fox News'tti akka himanitti garuu CIA'n ammallee qorannoo gaggeessa jira jechuun dubbatanii turan.
Hojjetaa Capital Gazette
Namichi qawwee qabate tokko gara waajira Capital Gazette kan Annapolis, Maryland, keessatti argamu gaafa Adoolessa 28 seenee hojjetoota barruu kanaa shan ajjeesee ture.
Shakkamtoonni gaazexaa kana waliin waldhabdee yeroo dheeraa kan qaban yommuu ta'u bara 2012 maqa balleessuudhan gaazexaa kana himatanii hin milkaa'iin hafan.
Rakkoo hamaa bakka hojii kanatti osoo addaan hin citiin mudatullee maxxansi akka addaan hin cinneef jecha bakka konkolaataa dhaabbatanitti hojjechuun cimina isaanii agarsiisaniiru. Gadda jaalleewwan hojii isaanii of biraa dhaban yeroo ibsanis fuula dubbii ijoo (editorial) akka yaadannootti qullaa hambisuudhaan kan dubbannu hin qabnu jedhan.
Goodayyaa suuraa Gaazexeessitoonni Capital Gazette yeroo bakka konkolaataa itti dhaabsifatanitti yeroo maxxansa gaazexichaa guyyaa itti aanuuf hojjetan
Maria Ressa fi Rappler
Gaazexeessituun CNN duraanii Maria Ressa fuula oduu kan ofiishee Rappler jedhamu Filiippiinsi keessatti bara 2012 hundeeffatte dubbii dhokataa qoratee gadi baasuudhaan maqaa gaarii horateera.
Fuulli gaazexeessituu kanaa Pirezedaanti Roodrigoo Duteretee qeequudhaan kan beekamu yommuu ta'u, sirrummaa yaada isaa qeequun keessattuu waraana qoricha sammuu nama adoochanii irratti bane kan ajjeechaa hedduuf sababa ta'e saaxileera.
Goodayyaa suuraa Jalqaba ji'a kanaa Maria Ressa mana murtiitti dhiyaattee ture
Bara 2016 pirezedaantichi akkuma filatameen ji'oota muraasaan booda Rappler fuulawwan Feesbuukii sobaa kan Duuteretee deggeruuf tolfaman jedhaman irratti gabaasa bal'aa dhiyeessiteetti.
Pirezedaanti Duutereetee gaabaasa fuula kanaa akka waan "jal'ataa" ta'etti maqaa itti baasuudhaan rippoorteroonni siyaasaa fuula kanaa akka waajiraalee pirezedaantii hin seenne dhorkan.
Amajji keessa ammoo Rappler irra eyyamni hojii mootummaadhaan irraa fudhatame kan ture yommuu ta'e walabummaa pireesii biyyattii kan gaaffii keessa galchedha jedhamuunis tarkaanfichi guutummaa biyyaatti mormii kaasee ture.
Sadaasa darbe kana fuulli oduu ishee Maria Ressa jedhamu kun gibira dhoksuu/waliindhahuudhaan himatamee ture. Isheen garuu himannaa kana "miidhaafi hacuuccaa ifatti anarratti banamedha" jette.
Wa Lone fi Kyaw Soe Oo
Gaazexeessitoonni Reuters Wa Lone fi Kyaw Soe Oo lamaanuu lammilee Maayinmaar kan ta'an labsii iccitii mootummaa cabsitan jedhamuudhaan Fulbaana darbe hidhaa waggaa toorbaatiin adabamanii turan.
Himanni kun kan isaan irratti banameef hojii ajjeechaa loltoonni biyyattii dhiirota Rohingya 10 raawwatan Fulbaana 2017 saaxilan irraa kan ka'edha.
Goodayyaa suuraa Kyaw Soe Oo (bitaan akkasumas Wa Lone erga Fulbaana itti murtaa'ee booda
Gaazexeessitoonni kunneen lamaan kan to'annaa jala oolan Mudde 2017 yeroo sanadawwan qondaalonni mootummaa itti kennan qabatanii deemaa jiran ture. Isaan garuu akka yakka irra qulqulluu ta'an ejjennoo isaanii akkuma ta'etti ibsaniiru garuu kan isaan irratti dhiyaate poolisiidhaan kan irratti qophaa'edha jedhuy.
Nama Cimaa Baranaa barrulee Time kan kan mo'ate kan biraan eenyudha?
Bara darbe, barruleen kun "warra sababa sodaan callisuu turecabsan" - dubartootaafi dhiirota miidhaa tutuqqaa saalaan ture ba'anii ifatti dubbatan "Nama Cimaa Baranaa" taasisuun ture kan filate.
Barruleen kun badhaasa kana kan jalqabe bara 1927 "Nama Cimaa Bara kanaa" jechuudhaan namoota "waan gaariinis ta'e waan hamaadhaan" dhiibbaa uuman waggaa waggaan filata.
Ajjeechaa Kaashogjii: Saawudiin gaaffii Turkii shakkamtoota akka kennituuf gaafattee didde
10 Muddee 2018
Tiraamp ajjechaa Jamal Kaashoogjii keessatti gaheen ilma mootichaa maal akka tahe gaafaan?
“Yoo ollaan nagayaan bule, nagaan bulani”
Keeniyaatti leenca nama nyaatee miliqe faana dha'aa jiru
'Dhimmi Maastar pilaani ammatti ajandaa keenya miti'
Namoonni maaliif waan gubu nyaachuu jaalatu?
Lolaafi wal-qoodiinsa hordoftoota amantaa Ortodoksii Eertiraa